Mo Salah Oo Rikoor Goolasha Ah Ka Dhigay Yurub Kadib Goolkiisa Wolves
[ May 10, 2021 ] Kooxda Ac Milan oo si toos ah ula wareegeysa Xidiga amaahda ku joogo ee Fikayo Tomori.	Wararka Ciyaaraha Maanta
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMo Salah oo Rikoor goolasha ah ka dhigay Yurub kadib Goolkiisa Wolves
December 7, 2020 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Weeraryahanka Liverpool Maxamed Saalax ayaa Rikoor cusub ka dhigay Yurub isagoo dhaliyay gool kale oo ay Reds ku dhalisay Anfield kulankii ay 4-0 kaga badiyeen Wolverhampton Wanderers.
Xiddiga reer Masar ayaa ka faa’iideystay qalad ka yimid Conor Coady wiilasha Jurgen Klopp ee kala ah Georginio Wijnaldum , Joel Matip iyo Nelson Semedo ayaa raacsaday goolasha kale
Isagoo gool u dhaliyay Liverpool , Salah wuxuu dhaliyay goolashiisii ​​52aad ee Premier League marka la eego guriga Liverpool, taasoo ka dhigeysa inuu kaalinta seddexaad kaga jiro liiska gooldhalinta goolasha ugu badan ee hal meel oo ka mid ah shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub tan iyo 2017 lagu dhaliyo.
Kaliya Lionel Messi ee Barcelona ee Camp Nou (63) iyo Bayern Munich Robert Lewandowski oo ku sugan Allianz Arena (59) ayaa ka horeeya Salah 52 jeer oo uu ku garaacay Anfield tan iyo markii uu ka yimid Roma seddex sano ka hor.
Si kastaba ha noqotee, 4-0 Liverpool kama caawin kaalinta ugu sarreysa ee qiimeynta, iyadoo Tottenham Hotspur ay weli hoggaamineyso hoggaanka ka dib guushoodii North London derby.
Kooxda Ac Milan oo si toos ah ula wareegeysa Xidiga amaahda ku joogo ee Fikayo Tomori.